Aadde Adaanech Abeebee: 'Kan tare tareera, kan tarerraa barachuun kan dhufuuf hojjechuudha' - BBC News Afaan Oromoo
Aadde Adaanech Abeebee: 'Kan tare tareera, kan tarerraa barachuun kan dhufuuf hojjechuudha'
25 Onkololeessa 2019
Aanga'oonni mootummaa namoota hiriira mormii gara okkaraatti jijjiiramuurraa kan ka'e miidhaman Hospitaala Waliigalaa Adaamaatti argamuun jajjabeessaniiru.
Ministirri Galiiwwanii Aadde Adaanech Abeebee namoota miidhamanii Hospitaalicha keessatti wallaanamaa jiran yeroo daawwataa jiranitti: "Taateen nu qunname jira. Taateen nu qunnameen lubbuu namaa bade, qabeenya manca'eefi nageenya boora'eetti baayyee gaddineerra.
Amma kan tare tareera; kan tarerraa barachuu kan dhufuuf ammoo hojjechuudha," jechuun BBC Afaan Oromootti himan.
Gaazexeessaan VoA osoo Adaamaatti hojiirra jiru rukutame
'Namni tokkoofi lama yaada isaa namarratti fe'uun hin danda'amu'
Yeroo ammaa magaalaa tasgabeessaa jiraachuu himanii, jiraattonni tasgabbaa'anii araaraa buusuurratti hojjechuuf qindaa'uu akka qabaniif hojjetama jedhan.
Aadde Adaanech negeenyi boora'uurraa kan buufatu hin jiru jedhanii, ummanni magaalaa bulchiinsa magaalichaa waliin qindaa'uun nagaa buusuu qaba jedhu.
Warroota miidhamaniif deggersa adda addaa godhamuufiif, warri namni jalaa du'es akka jajjabeeffaman, hawwaasafi mootummaarraallee gargaarsa argachuu akka qaban kaasan.
"Qabeenyaa bade deebisuu ni dandeenya garuu lubbuu bade garuu deebisuun waan hin danda'amneef kun barnoota guddaadha.
Waan morman, waan sirrii miti jedhamu sirrii miti jechuun waan haarawaa miti addunyaarras ni jira; ni danda'ama.
Garuu yoo gara jeequmsaafi gara walitti bu'insaatti deeme ammoo badii akkanaa hordofsiisa waan ta'eef kanarratti akka mootummaattillee cimnee hojjechuu akka qabnu; gara fuula duraattillee wanti akkanaa kun nutti deebiyuu akka hin qabne waan ilaalledha jechuudha."
Taatee amma uumame kanaarraa namni irraa fayyadame hin jiru kan ibsan Aadde Adaanech, hojiin itti fufinsaan hojjetamuun barbaachisaadha jedhan.
"Nageenyarrattis, misoomarrattis, tokkummaa ummataarrattis, ummanni waljaallatee, walkabajee, mirga walii eegee waliin jiraachuu akka qabu hojii yeroo tokko hojjettee irraa deebitu miti. Yeroo hojii hojjetamuu qabudha.
Hojii yeroo hundaa ija irraa deebifachuu hin qabnedha."
Itti-gaafatamtuun Waajira kominikeeshinii Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa Aadde Rawuudaa Huseen namoonni hiriira mormii gara okkaraatti jijjiiruun lubuun namoota hedduu akka darbuuf sababa ta'an 60 to'annoo jala oolfamaniiru jedhan.
Akka Itti-gaafatamtuu kanaatti, namoonni hin beekamne gareedhaan gurmaa'anii hiriira mormii nagaan gaggeeffamaa ture keessa fakkaatanii seenuun gara walitti bu'insa sabaafi amantaatti jijjiiruuf hojjetaniiru.
Hirmaannaa Qeerroofi Qarreetiin walitti bu'insi gara sabaafi saba, akkasumas amantaa gidduutti akka uumamuuf ture fashalaa'uu himanii, magaalli Adaamaa tasgabboofteetti jedhan.
Hiriira mormii guyyoota sadan darban turee gara okkaraatti jijjiirame kanaan Adaamaatti qofa yoo xiqqaate namoonni 16 ajjeefamuu maddeen hospitaalarraa argaman mullisaniiru. Namoonnii 100 ol ta'anis madaa'anii, qabeenyis manca'eera.
Aadde Adaanech gaazexeessaa raadiyoo sagalee Ameerikaa (VoA) kutaa Faafaan Oromoo osoo Adaamaatti hojiirra jiruu rukkutamee hospitaala gales daawwataniiru.
Janaraal Hayiluu Gonfaa: 'Yoo eessa tuqne Oromoo walitti buusna jedhamee, itti yaadamee kan godhamedha'
Boordichi lakkoofsi namoota filannoof kaardii fudhatanii miiliyoona 31 caaluu hime